Xiaomi स्मार्ट होम र अधिकबाट3अवधारणाहरू! ZigBee, ब्लुटुथ र वाइफाइ - स्मार्टमी
सियामी होम र अधिकबाट con अवधारणाहरू! ZigBee, ब्लुटुथ र वाइफाइ
1 अगस्ट 2020
Aqar, ब्लूटूथ, wifi, Xiaomi, xiaomi घर, zigbee
सबैजनासँग स्मार्ट होम हुन सक्छ। यो स्मार्टमी पछाडिको विचार हो र हामी यसमा अडिनेछौं। जे होस्, सबैले केहि बिन्दुबाट सुरु हुन्छ र जिग्बी के हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्दछ, वाइफाइ किन उपकरणहरूमा महत्त्वपूर्ण छ र यी सबै ब्लुटुथ गेटवे चिन्तित छन्। यस गाईडमा, तपाईंले सीओमी होमको संसारबाट तीनवटा आधारभूत अवधारणाको अर्थ बुझ्नुहुनेछ।
यो लेख केहि महिना पहिले लेखिएको थियो, तर हामीले यसलाई कडा निर्णय गरे रिफ्रेस गर्नुहोस्। शाओमी होम इकोसिस्टमको मुटु मी होम एप्लिकेसन हो। यो जहाँ तपाईं थप उपकरणहरू जोड्नुहोस् र यसको आधारमा तपाईंको स्मार्ट घर निर्माण गर्नुहोस्। जहिले पनि ध्यानमा राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा क्षेत्रको मुद्दा हो। तपाईं चीन क्षेत्र वा यूरोप क्षेत्रबाट उपकरणहरू र गति सेन्सरहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। परिमार्जित वा क्लोन अनुप्रयोग बिना, तपाईं ती सबै एक स्मार्ट घर अनुप्रयोगमा थप्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईंले क्षेत्र राम्रोसँग सेट गर्नु पर्छ। हामीले यस बारे मा पहिले नै लेखिसकेका छौं पुस्तिका.
शाओमी होम उत्पादनहरूका बारे एक मुट्ठी आवश्यक जानकारी
एकचोटि हामीसँग एक राम्रो कन्फिगर गरिएको अनुप्रयोग छ र बक्सबाट उपकरण हटाउछ, हामी यसलाई काम गर्न चाहान्छौं। उत्पादनहरूको सम्पूर्ण सेट जानकारी पठाउने सेन्सरहरूको प्रयोग गरी सजिलैसँग स्मार्ट घर प्रदान गर्नुपर्दछ। र तपाइँका उपकरणहरू राम्रोसँग सेट अप गर्न र खुसी हुन, तिनीहरू कुन श्रेणीमा पर्दछन् भन्ने कुरा जान्न लायक छ।
यी उपकरणहरूले कुनै पनि दृश्य निर्माण गर्न अनुमति दिँदैन। थप रूपमा, हामी केवल तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्दछौं जब हामी नजिकै छौं। यस्तो उपकरणको उदाहरण को लागी Xiaomi केतली छ।
ब्लुटुथ गेटवे - यो गेटले हामीलाई टाढाबाट ब्लुटुथ उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले यसले स्मार्ट घरको भागको रूपमा उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्दछ। यस्ता लक्ष्य को उदाहरण हो फिलिप्स एलईडी बत्ती - शाओमी, जुन धेरै उपयोगी उपकरणहरू मध्ये एक हो जसको लागि तपाईं दैनिक, दोहोर्याउने गतिविधिहरूको स्वचालनको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
BLE - ब्लूटूथ कम ऊर्जा। यो एक नयाँ ब्लुटुथ टेक्नोलोजी हो जसले धेरै कम ऊर्जा खपत गर्दछ। यसको लागि धन्यबाद, ब्लुटुथ उपकरणहरू एकल ब्याट्रीमा धेरै लामो समय सम्म रहन सक्छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय उपकरणहरु। उपकरणले राउटरमा संलग्न गर्दछ र यसरी हामी कहिँबाट पनि पहुँच गर्न सक्दछौं। याद गर्नुहोस् कि कुनै पनि अवरोधहरू, उदाहरणका लागि, पर्खालहरूले, संकेतलाई बाधा पुर्‍याउँछ। यसैले उपकरणसँग राम्रो पहुँच हुनुपर्दछ राउटरको माध्यम बाट वायरलेस डाटा ट्रान्सफर अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईंको सीमा कमजोर छ भने, यो विचार गर्न लायक छ संकेत एम्पलीफायरकसले तपाईको लागि यसलाई लामो पार्छ।
Zigbee एक कम कम ऊर्जा लागत मा संचार अनुमति दिन्छ। उपकरणहरू दुई प्रकारका रूपमा काम गर्दछ: ब्याट्री अपरेटरेट र सोकेटमा सिधा प्लग। एकल ब्याट्री उपकरणहरू कम्तिमा दुई वर्षसम्म रहनु पर्छ र यो ZigBee प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नका लागि आवश्यकता हो।
बाहिरी दुनियासँग कुराकानी गर्न उपकरणहरूलाई प्रवेश द्वारको आवश्यक पर्दछ। यसका लागि धन्यबाद, सञ्चारको महत्त्वपूर्ण अंशले हाम्रो नेटवर्कलाई भार पार्दैन। सबै संचार प्रमाणीकरण गरिएको छ किनकि उपकरणले पहिले गेटवेसँग जोडी गर्नुपर्दछ।
Zigbee उपकरणहरू लामो दूरीमा अपरेट गर्न सक्दछन्। प्रत्येक उपकरण जुन सकेटमा प्लग गरिएको छ एम्पलीफायरको रूपमा काम गर्दछ। हामी5उपकरणहरूको एक लाइन पनि बनाउन सक्दछौं जसले संकेतलाई विस्तारपूर्वक विस्तार गर्दछ।
ZigBee को फाइदा पनि डाटामा तत्काल पहुँच हो। हामीसँग वास्तवमा यहाँ कुनै ढिलाइ छैन। यस कारणका लागि, त्यहाँ अरूहरू पनि छन् उत्सुकतापूर्वक मोशन सेन्सरको रूपमा प्रयोग, जहाँ समय विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
तीन प्रकारका उपकरणहरू
Zigbee उपकरणहरू तीन प्रकारका उपकरणहरूमा खस्छ:
गेट यसको कार्य अन्य उपकरणहरूको कार्यको समन्वय गर्नु हो। यो के हो जुन अन्य उपकरणहरूले जडान गर्दछ र यसले जानकारी स .्कलन गर्दछ। गेटहरूमा प्राय: यन्त्रहरूको संख्यामा सीमितता हुन्छ जुन तिनीहरूलाई संलग्न गर्न सकिन्छ - १,, or२ वा पनी devices 16 उपकरणहरू!
एम्प्लीफायर एक ZigBee उपकरण हो जुन तपाईं सकेट मा प्लग इन। याद गर्नुहोस्, तथापि, यो N कन्डक्टरको साथ हुनुपर्दछ! यो एक प्रकाश बल्ब, एक आउटलेट, वा भित्ता स्विच हुन सक्छ। स a्केत अधिकतम devices उपकरणहरूमा विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यसैले यदि हामीसँग अन्तिम उपकरण छ, उदाहरण: गेटबाट २० मिटरमा, ढोका आफैंले यसलाई पत्ता लगाउँदैन। तर एम्प्लीफायरहरूलाई धन्यवाद, यसले यसलाई पुग्न सक्दछ।
अन्तिम उपकरण ब्याट्री संचालित छ। प्रायः यी सेन्सरहरू हुन्। ट्राफिक, पानीको बाढी, धुम्रपान, ईड स्विच। यी सबै उपकरणहरू सिधा गेटमा संलग्न हुन्छन् र उनीहरूलाई उनीहरूको अवस्था र उनीहरू अहिले कुन मापन गर्दै छन् भन्ने बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। उपकरणहरू शक्ति बचाउन निद्रामा जान्छन्, तर मिलिसेकेन्डमा उठ्दछन्।
शाओमी मात्र शाओमी मात्र होइन
शियाओमी यसको सबै उत्पादनहरूको एकमात्र निर्माता होइन। यो बिभिन्न प्रविष्टिको लागि बिषय हो, तर यो जान्न लायक छ कि शाओमीले बिभिन्न निर्माताहरूबाट उपकरण बेच्छ। के उनीहरूसँग मिल्ने भनेको Mi Home अनुप्रयोगको साथ एकीकरण हो। यसका लागि धन्यबाद, तपाईं यससँग अन्यहरू माझ उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ रोबरोक, येललाईट, स्मार्टमी, भियोमी, अकारा र अन्य धेरै निर्माताहरूबाट। हामीले लेखहरूको अलग श्रृंखलामा उनीहरूको पूर्ण सूची तयार गरेका छौं - भाग 1, भाग 2.
Apple HomeKit, गृह सहायक, समीक्षा, शाओमी होम
अकारा जादू क्यूब - Xiaomi घन समीक्षा
Aqar, आकारा जादू क्यूब, Xiaomi
के एउटा सानो असंगत घन स्मार्ट होमको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हुन सक्छ? अकारा जादू क्यूब को लागी धन्यवाद, मैले हो पाए। तर होशियार! यसको लागि तपाइँसँग विशेष विचार हुनुपर्दछ। अकारा जादू क्यूब समीक्षा पढ्नुहोस्। अकारा जादू क्यूब हो ...
त्यहाँ धेरै अन्य निर्माताहरू छन् जसको सियाओमी उत्पादनहरू बिक्री हुन्छन तर एकीकृत हुँदैन र उनीहरूसँग आफ्नै अनुप्रयोगहरू छन्। यो कै क्यामी क्यामेराको मामला हो जुन तपाईं एमआई होममा जडान गर्नुहुने छैन।
यस जानकारीको साथ तपाईसँग स्मार्ट घर उपकरणहरूको प्रकारको बारेमा आधारभूत ज्ञान छ। अब प्रयास गर्न अरू केहि छैन! स्मार्ट होम एक ठूलो सम्झौता हो र हामी सबैलाई यसलाई सिफारिस गर्छौं।
शाओमी होम - स्मार्ट घर तपाईंको घर हो
स्मार्ट घरको विचार भनेको चयन गरिएको स्थानलाई प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत आवश्यकतामा अनुकूलन गर्नु हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, शाओमी स्मार्ट होम जडित, कन्फिगर गरिएको समाधानहरूको सेट हो जुन मुख्य रूपमा तपाईं र तपाईंको प्रियजनहरू वा पाहुनाहरूको सुविधाका लागि हो।
त्यसपछिका उपकरणहरूमा लगानी गरेर, एप्लिकेसन स्तरबाट उनीहरूको कार्यक्षमता सेट गरेर, आफ्नै स्वामित्व सेट बनाउँदै, तपाईले देख्न थाल्नुहुन्छ कि व्यक्तिगतकरण कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। यी अधिक, सायद अनावश्यक, ग्याजेटहरू होइनन् जुन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने तरिका लागू गर्दछन्, कार्यात्मक योजना भन्दा पर जान अनुमति दिदैन्। यसको विपरित - प्रविष्ट गरिएको जानकारीमा आधारित, सेन्सर वा कुनै पनि अन्य सियाओमी स्मार्ट उपकरण तपाईंको इच्छा अनुसार कार्य गर्दछ, अवश्य पनि, उपलब्ध विकल्पहरूमा।
उत्पादनहरू जस्तै स्मार्ट मोशन सेन्सरको साथ (वा अन्य सेन्सरहरूको संख्या) तपाईं वायरलेस र स्वचालित रूपमा सुरक्षाको स्तर बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं सान्त्वना महसुस गर्नुहुन्छ कि यति धेरै उपकरणहरू छिटो काम गर्दछन् र तपाईंको सहभागिता बिना। सुविधाजनक अनुप्रयोगका लागि धन्यवाद, तपाइँले सबै जानकारी र कार्यहरू सेट गर्नुभयो जुन तपाइँलाई चाहिन्छ र तपाइँलाई चासो दिनुहोस्, र बाँकी उपकरण अपरेशनको कुरा हो। स्मार्ट सेन्सर सेट मोशन सेन्सरहरूले Xiaomi ब्रान्डद्वारा हस्ताक्षर गरेको वा Xiaomi स्मार्ट होम प्रणालीसँग सहकार्य गरेर दर्जनौं समाधानहरूको सूची खोल्दछ।
जब हामी हाम्रो स्मार्ट घरको योजना गर्दछौं, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रा आवश्यकताहरूलाई परिभाषित गर्नु हो। हामी त्यसपछि आफैलाई एक आधारभूत प्रश्न सोध्छौं - हामी के यो प्रकारको टेक्नोलोजीसँग स्वचालित गर्न सक्छौं? हामी एक निर्माताबाट उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, तब यो एकदम सजिलो हुन्छ ...
यस लेखमा तपाईले तीनवटा आधारभूत अवधारणा सिक्नुभयो जुन स्मार्ट घरको जग हो, त्यसैले "ब्लुटुथ", "वाइफाइ" र "जिग्बी"। यो संसारलाई आमन्त्रित निमन्त्रणा हो जसमा टेक्नोलोजीले तपाईंको जीवनको आराम बढाउँदछ, तपाईंलाई ऊर्जा र अनमोल समय बचत गर्न अनुमति दिन्छ, सम्पत्ति सुरक्षा र सुरक्षाको सामान्य भावनालाई समर्थन गर्दछ। र सबै भन्दा राम्रो - त्यहाँ कुनै कडा मूल्य सूची, एक मात्र सही विकल्प, कुनै कडा सम्बन्ध छैनन्।
प्रणाली जति बढी खोल्छ, राम्रो छ। उपकरणहरू थपेर र अधिक उत्पादनहरू स्थापना गरेर, तपाईं स्मार्ट घरको अधिक र अधिक लाभहरू देख्नुहुनेछ। किनभने स्मार्ट घर स्मार्ट घर हो, जुन तपाईं यसलाई कसरी प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, यसलाई स्वचालित गर्नुहोस्, समायोजित गर्नुहोस्।